Dumar yar oo xilal sare ka haya ayaa qaata mushaharooyin sare - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dumar yar oo xilal sare ka haya ayaa qaata mushaharooyin sare
La daabacay fredag 14 juni 2013 kl 17.38
Laba dumar ah oo qura ayaa ku jira tobankii qof oo xilal sare ka dowladda laamaheeda isla markaasna qaata mushaharooyin sare. Laakiin tobanka ugu mushaharooyinka yar, toddobo ayaa dumar ah. Sidaasna waxaa lagu muujiyey baaritaan uu sameeyey wargeyska Dagens Nyheter.
Farqiga u dhexeeya mushaharooyinka ragga iyo dumarka dowladda u shaqeeya si joogto ah ayey isu soo dhimayeen sanooyinkii dambe laakiin weli dhibaato weyn ayaa ka jirta. Sannadkii 2012 waxay mushaharooyinka dumarku ka yaraayeen kuwa ragga boqolkiiba 10. Weli farqi weyn ayaa u dhexeeya mushaharooyinka ragga iyo dumarka xataa marka ay dowladda qudheedu dad shaqaaleyneyso oo mushaharooyinka dejineyso.
Kulan ay 30 mey isugu yimaadeen golaha wasiiradu waxaa lagu go’aamiyey in la kordhiyo mushaharooyinka 200 qof oo madax ka ah hay’adaha dowladda. Kuwaasna waxaa ka mid ah agaasimayaal guud, madax hay’adeed, guddoomiyayaasha gobollada, madaxa maamulada gobollada iyo madaxda kale ee laamaha dowladda.
Wargeyska DN ayaa kadib markii uu akhristay go’aankaas baaritaan ku sameeyey farqiga u dhexeeya mushaharooyinka ragga iyo dumarka. Dadkaas madaxda ahi waxay ka koobnaayeen 116 rag ah iyo 109 dumar ah. Celcelis ahaan wuxuu mushaharka qofka dumarka ahi ka hooseeyey ka ninka 2780 karoon bishii. Farqiga mushaharooyinku waa uu hooseeya marka la barbardhigo mushaharooyinka ay qaataan shaqaalaha dowladdu.
Laakiin markii baaritaan lagu sameeyey madaxda ugu mushaharooyinka badan waxaa soo baxay sawir kale. Tobankii qof oo jagooyin sare haya qaatana mushaharooyin sare, labo qura ayaa dumar ka ah.